ဗိုက်ထဲကလေးငယ်ရဲ့ပုံကသရဲနဲ့တူနေလို့ ထိတ်လန့်နေတဲ့မိခင်လောင်း - APANNPYAY
Home / နိုင်​ငံတကာသတင်း / ဗိုက်ထဲကလေးငယ်ရဲ့ပုံကသရဲနဲ့တူနေလို့ ထိတ်လန့်နေတဲ့မိခင်လောင်း
Apann Pyay 5:46 AM နိုင်​ငံတကာသတင်း Edit
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မစ်ဒယ်ဘရော့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ အသက်(၂၅)နှစ်အရွယ် Stunned Charlotte အမည်ရ အမျိုးသမီးဟာ သူမ လွယ်ထားရတဲ့ (၂၀)ပတ်သားအရွယ် ကိုယ်ဝန်ကို Scan Photo သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Scan ပုံကို အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ကြည့်ပြီး အိမ်ကို ယူခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ကိုပြန်ရောက်လို့ သေချာကြည့်တဲ့အခါကျမှ မမွေးရသေးတဲ့ကလေးရဲ့ Scan ပုံဟာ Scream flicks ဇာတ်ကားထဲမှာပါတဲ့ သရဲပုံနဲ့ တူနေလို့ ထိတ်လန့်တကြား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ Charlotte က “Scan ကိစ္စပြီးသွားတော့ ကျွန်မလည်း ပုံကိုယူပြီး အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ပါတယ် … အိမ်ကိုရောက်လို့ ပြန်ထုတ်ကြည့်တော့ ကျွန်မ တော်တော်လေး လန့်သွားပါတယ် … အဲဒီနောက် ကျွန်မချစ်သူဆီကို အမြန်သွားခဲ့ပြီး ဒါဟာ .. ကြောက်စရာပုံကြီးနဲ့ တူမနေဘူးလားလို့ မေးလိုက်ပါတယ်” သူမက ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
အသက်(၂၇)နှစ်အရွယ် သူမရဲ့ချစ်သူ Paul Smith ကလည်း အဲဒီပုံကိုကြည့်ပြီး သူမျက်လုံးကိုတောင် သူ မယုံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Paul Smith က ” ကျွန်တော်တို့ သရဲဆိုတာကိုတော့ သိပ် မယုံကြပါဘူး …. ဒါပေမယ့် ဒါဟာ တက
ကယ့်ကို ကြက်သီးထစရာပါ … နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မကြည့်ဝံ့တော့လောက်အထိ ပါဘဲ “လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ Scan ထဲက ကလေးပုံဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ မျက်လုံးနက်နက် … ပါးစပ်ပြဲပြဲနဲ့မို့ သူတို့တစ်တွေ ထိတ်လန့်မယ်ဆိုရင်လည်း ထိတ်
လန့်စရာပါဘဲ။ မွေးမယ့်ရက်ကတော့ ဒီဇင်ဘာ၁၁ရက်နေ့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Credit: နတ်စည်တော် (Shwemom
အင်ျဂလနျနိုငျငံ မဈဒယျဘရော့မွို့မှာနထေိုငျတဲ့ အသကျ(၂၅)နှဈအရှယျ Stunned Charlotte အမညျရ အမြိုးသမီးဟာ သူမ လှယျထားရတဲ့ (၂၀)ပတျသားအရှယျ ကိုယျဝနျကို Scan Photo သှားရောကျရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ Scan ပုံကို အမှုမဲ့အမှတျမဲ့ကွညျ့ပွီး အိမျကို ယူခဲ့ပါတယျ။
အိမျကိုပွနျရောကျလို့ သခြောကွညျ့တဲ့အခါကမြှ မမှေးရသေးတဲ့ကလေးရဲ့ Scan ပုံဟာ Scream flicks ဇာတျကားထဲမှာပါတဲ့ သရဲပုံနဲ့ တူနလေို့ ထိတျလနျ့တကွား ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ Charlotte က “Scan ကိစ်စပွီးသှားတော့ ကြှနျမလညျး ပုံကိုယူပွီး အိမျကို ပွနျခဲ့ပါတယျ … အိမျကိုရောကျလို့ ပွနျထုတျကွညျ့တော့ ကြှနျမ တျောတျောလေး လနျ့သှားပါတယျ … အဲဒီနောကျ ကြှနျမခဈြသူဆီကို အမွနျသှားခဲ့ပွီး ဒါဟာ .. ကွောကျစရာပုံကွီးနဲ့ တူမနဘေူးလားလို့ မေးလိုကျပါတယျ” သူမက ပွနျပွောခဲ့ပါတယျ။
အသကျ(၂၇)နှဈအရှယျ သူမရဲ့ခဈြသူ Paul Smith ကလညျး အဲဒီပုံကိုကွညျ့ပွီး သူမကျြလုံးကိုတောငျ သူ မယုံနိုငျဖွဈခဲ့ရတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ Paul Smith က ” ကြှနျတျောတို့ သရဲဆိုတာကိုတော့ သိပျ မယုံကွပါဘူး …. ဒါပမေယျ့ ဒါဟာ တက
ကယျ့ကို ကွကျသီးထစရာပါ … နောကျတဈကွိမျ ထပျမကွညျ့ဝံ့တော့လောကျအထိ ပါဘဲ “လို့ ဖှငျ့ဟခဲ့ပါတယျ။ Scan ထဲက ကလေးပုံဟာ အလှနျကွီးမားတဲ့ မကျြလုံးနကျနကျ … ပါးစပျပွဲပွဲနဲ့မို့ သူတို့တဈတှေ ထိတျလနျ့မယျဆိုရငျလညျး ထိတျ
လနျ့စရာပါဘဲ။ မှေးမယျ့ရကျကတော့ ဒီဇငျဘာ၁၁ရကျနဖွေ့ဈတယျလို့သိရပါတယျ။